प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा थप सुधार, रिपोर्ट सकारात्मक : अस्पताल
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा थप सुधार भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको रगत परीक्षण र छातिको एक्सरेको रिपोर्ट पनि सकारात्मक आएको छ । यसैगरी स्वास्थ्यमा सुधार आइराख्यो भने एक–दुई दिनमा डिस्चार्ज गर्ने अस्पतालले जनाएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका प्रा. डा. उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले […]
काठमाडौँ । छातीमा संक्रमणसँगै श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ । दसैँको टिकाको दिनदेखि बिरामी परेका प्रधानमन्त्रीलाई सोमबार बिहान ४ः३० बजे महाराजगञ्जस्थित कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरिएको हो । सेन्टरका निर्देशक प्रा. डा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले श्वासनलीमा भएको संक्रमणलाई मिर्गौलासम्म […]
प्रधानमन्त्री ओलीको आइसीयूमा उपचार हुँदै, छातीमा संक्रमण र शरीरमा चिनीको मात्रा असन्तुलित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छातीमा संक्रमण र शरीरमा चिनीको मात्रा असन्तुलित देखिएको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले जनाएको छ । अस्पतालले आज विहान विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो । स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि आज बिहान ४ः३० बजे प्रधानमन्त्री ओलीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उहाँको […]
प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना, स्वासप्रश्वासमा समस्या, आइसियूमा राखेर उपचार हुँदै
काठमाडौं । स्वास्थ्यमा समस्या दिखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी शनिबारदेखि नै रुघाखोकीले ग्रस्त थिए । थप समस्या देखिएपछि आइतबार राति नै उनलाई महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टरको आइसियूमा राखि उपचार गरिँदै छ । उनको स्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि अस्पताल लगिएको हो। अहिले ९ बजे अस्पतालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर […]
काठमाडौं । कोटेश्वर जडिबुटीको जामका कारण ठूलै सास्ती भोगिरहेका उपत्यकावासी लगायत यात्रुहरुका लागि विकल्पको खोजी थालिएको छ । पहिलो चरणमा गाडीको जामको चाप केही न्यून गर्न सडक पीच गरिएको छ । कोटेश्वर जडिबुटीको जाम खोल्न जडिबुटी पुलदेखी हनुमन्ते करिडोर सडक पिच गर्ने कार्य सम्पन्न भएको हो । पहिलो चरणमा जडिबुटीको पुलदेखि आखाँ अस्पताल हुँदै हनुमन्ते […]
पार्टी र सरकारलाई कमजोर पार्न ठूलै कसरतः अध्यक्ष प्रचण्ड
चितवन । कृष्ण आचार्य । नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता र सरकारलाई कमजोर पार्न देशभित्र र बाहिरबाट ठूलो कसरत भइरहेको बताएका छन् । नेकपा चितवनले आज भरतपुरमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एकता प्रक्रिया तुहाउन कसरत गर्नेहरु फेरि सक्रिए भएको बताए । ‘राजामहाराजाले दिएर आएको परिवर्तन होइन’ अध्यक्ष […]
सगरमाथाकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाइ कारबाही गर्न पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक चन्द्र साहले समाचार संकलनमा क्रममा सगरमाथाकर्मीमाथि दुव्यवहार गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा नागरिक र सेवाग्राहीको सहज पहुँच हुनुपर्नेमा विभागका जिम्मेवार अधिकारीबाटै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्वाददाता शिखा श्रेष्ठ र क्यामेरा पर्सन अजय हाकुजुलाई धम्की दिँदै समाचार संकलनमा अवरोध गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको महासंघले […]
पार्टी एकीकरण जस्तै अव्यवस्थित चियापान
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विजयादशमी, दीपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर शनिबार राजधानीमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्यो । काठमाडौँको भुकुटीमण्डस्थित बगैँचामा राखिएको चियापान स्थल साँघुरो भएकाले अस्तव्यस्त देखिएको थियो । उक्त स्थानमा प्रवेश गर्नका लागि कार्यकर्ताहरुले घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको थियो । लामो समय लाइन बस्नुपरेकाले केही कार्यकर्ताहरु बीचबाटै बाहिरिएका थिए । केही […]
निर्मला पन्तको हत्यारालाई कानूनी कारबाही गर्न काँग्रेस सभापति देउवाको माग
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको छ । नेपाल तरुण दल स्थापनाको ६५औँ वर्षगाँठका अवसरमा शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान एवं चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे सभापति देउवाले दुई प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनुभयो । हत्या, बलात्कारजस्ता […]
नेकपाको चियापान शुरु, ५० हजारलाई निमन्त्रणा
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत् र छठका अवसरमा शनिबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । चियापान कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई नेकपाका शिर्ष नेताहरुले स्वागत गरेका छन् । कार्यक्रममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा, कूटनीतिज्ञ तथा विकासका साझेदारहरुलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । […]